Porn သည်ငါတို့အတွက်ကောင်းသလား၊ ဖိလစ် Zimbardo ပါရဂူဘွဲ့။ (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
နယူးသုတေသန porn စောင့်ကြည့်အကြံပေးအချို့မလိုလားအပ်သောအကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်စေခြင်းငှါ
ပြည်သူ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ရှိသည် porn နှင့် ပတ်သက်. တူညီသောမေးခွန်းများကိုမေးရန်ကိုဆက်လက် - ကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်ငါတို့အဘို့အမကောင်းတဲ့အဘို့အညစ်ညမ်းကောငျးသလဲ ကငျြ့ပကျြဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကအားပေးပါသလဲ? ထိခိုက်သို့မဟုတ်လွတ်မြောက်? ဤမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းခြင်းမလွှဲမရှောင်ထင်မြင်ချက်များနှင့်အနည်းငယ်သာအခြားတစ်ဦးပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများစေပါတယ်။ ဟုမေးခံရမဟုတ်ကြောင်းတစ်ခုမှာမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: porn ဘာကိုအကြှနျုပျတို့အားလုပ်နေတာနှင့်အတူ OK ကိုငါတို့သလဲ?
အချို့လူများကရံဖန်ရံခါ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံရမနိုင်, သို့သော်အလွန်အမင်းပလပ်စတစ်ဦးနှောက်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များနှင့် Pre-ဆယ်ကျော်သက်အပါအဝင်ထွက်ရှိလူများ၏ပဒေသာ, သူတို့လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်အစစ်အမှန်ဘဝနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းထဲကဖြစ်လာသူတို့ရဲ့ porn အရသာနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုနေရှာတွေ့ လိင်.
ရုံက်ဘ်ဆိုက်များ YourBrainOnPorn နှင့် Reddit ရဲ့အဘယ်သူမျှမ FAP (အွန်လိုင်း porn ရန်မတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) သူတို့တစ်ဦးကအရှိန်မြင့်တက်လာဖြစ်ပါတယ်ခံစားရဘယ်အရာကိုကျော်လွှားရန်ရုန်းကန်လူငယ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှပုံပြင်များကိုမြင်ဖိုရမ်သို့သွားရောက် စှဲမွဲမှု.
ပထမဦးဆုံးအစဉ်မှာတော့ ဦးနှောက် ဘာလင်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက်မက် Planck အင်စတီကျုမှာကောက်ယူခဲ့သည့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအပေါ်လေ့လာမှု, သုတေသီများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏နာရီနှင့်နှစ်ပေါင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဆုလာဘ် sensitivity ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးနှောက်၏ဒေသများတွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျော့ကျအဖြစ်လျှော့ချ ခေါ်ဆောင်သွားနေဆဲဓါတ်ပုံတုန့်ပြန်။
ဒီထက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျော့နည်းဆိုလိုတယ် dopamine နှင့်နည်းပါးလာ dopamine receptors ။ ဦးဆောင်သုတေသီဆီမှKühn၏ "အဲဒီပုံမှန်စားသုံးမှုတွေးဆ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသင်တို့၏အကျိုးစနစ်ကထွက်ကျီ။ "
ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Playboyယင်းအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးပုံစံကိုအများဆုံးမိတ်ဆက်သောမဂ္ဂဇင်း, မရှိတော့အစောပိုင်း 2016 ပြီးနောက်ဝတ်လစ်စလစ်ကစားဖော် feature ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးဝတ်လစ်စလစ်ပြဿနာများ၏အဖုံးအပေါ် featured သူ Pamela Anderson ကသကဲ့သို့, "ဒါဟာအင်တာနက်ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်ခက်ခဲပါတယ်။ " ဟုပြောသည်
တစ်ဦးကသီးခြားဂျာမန်လေ့လာမှုပွင့်လင်းခြင်းနှင့် arousal ၏ဒီဂရီ tabs များ၏နံပါတ်များနှင့်အတူပါဆုံးအနီးကပ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းအသုံးပြုသူများက '' ပြဿနာကိုပြသခဲ့သည်။ ဤသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အသစ်အံ့သြစရာ, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလွန်ကဲ, porn အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာရှင်းပြကူညီပေးသည်။ သူတို့ကနှိုးဆွဖြစ်လာတစ်ခုစိုက်ထူရမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထွတ်အထိပ်မှီဖို့ ပို. ပို. ဆွလိုအပ်ပါတယ်။
ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကဦးဆောင်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုသူတို့ရွယ်တူလုပျဆောငျထက်ပိုမြန်မြင်သောအရာကိုမှ habituate ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသရုပ်ပြတဲ့သူယောက်ျားဟာသူတို့ရဲ့ရွယ်တူထက်ပိုမိုနှင့်ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေလိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကနေနောက်ထပ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှိသူတို့ porn ကိုကြည့်ပြီးနောက် limbic ဦးနှောက် circuitry အတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲမှနှိုင်းယှဉ်သောအမူအကျင့်စွဲပြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်ညစ်ညမ်းဖို့သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်အကြား dissociation ရှိပါသည် - အသုံးပြုသူများသည်မှားယွင်းစွာသူတို့ကိုအရှိဆုံးနှိုးဆော်ခြင်းသောညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့လိင်၏ကိုယ်စားလှယ်ကြောင်းယုံကြည်စေခြင်းငှါ။
ထို့နောက်ကြောင်း porn အသုံးပြုသူများကိုပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာသတင်းပို့ခြင်းမရှိတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်လျော့နည်းကျေနပ်မှု နှင့်စစ်မှန်သောဘဝရငျးနှီးမှုနှငျ့ ကို attachment ပြဿနာများကို။
လုလင်တစ်ဦးကအများကြီးအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းတဲ့ "လိမ်" သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကိုလိင်နှင့်နွေးထွေးမှု၏လက်တွေ့ရှုမြင်လို့ယူဆတယ်နေကြသည်သူတို့ကိုအားပေးတော်မူပြီ, နှင့်မည်သို့သူတို့ထို့နောက်ကခက်ခဲစိတ်ဝင်စားနှင့်တစ်ဦးကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွရဖို့ရှာတွေ့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆို။
အမှန်စင်စစ်သူတို့ထဲကအတော်များများများအတွက်စစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံနိုင်ငံခြားနှင့်စိုးရိမ်စိတ်စားစရာအတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သောကြောင့်ဤသည်၎င်းတို့၏တစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်စေ့စပ်ခံရဖို့နဲ့မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာလိုအပ်ချက်များကိုသူအခြားသုံးရှုထောင်ဇာတိပကတိအား-and အသွေးသည်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရမယ်လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ် Dawn မှာလိင် တစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာဥပစာကမ်းလှမ်း:
ရန်သူတစ်ယောက်သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏လက်ချောင်းကိုကိုက်ခြင်းဖြင့်စွဲချက်တင်ခံရသည့်လူတစ် ဦး အားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ မျက်မြင်သက်သေတစ် ဦး သည်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးရှေ့နေက“ မင်းငါ့ကိုငါ့ဖောက်သည်လက်ညှိုးပြတ်တာမြင်တာလား” ဟုမေးခဲ့သည်။ မျက်မြင်သက်သေက“ ကောင်းပြီ၊ “ အေ့၊ ရှေ့နေတစ် ဦး smug အပြုံးနှင့်အတူကဆိုသည်။ သူသည်ထိုလူ၏လက်ဖျားကိုထိမိသောသူဖြစ်သည်ဟုအဘယ်သို့ဆိုနိုင်သနည်း။ သက်သေခံက“ ကောင်းပြီ” ဟုပြန်ဖြေခဲ့သည်။
အွန်လိုင်း porn ကိုကြည့်လူငယ်များ၏ဆက်စပ်၌ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ။ အွန်လိုင်း porn ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူအပေါ်သေးသောအပြည့်အဝလူ့သမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမီ, စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သောဆိုးကျိုးများလုလင်တို့သည်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အဖြစ်လူသိများသည့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြသော်လည်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) ။
1948 အတွက်အဲဖရက် Kinsey အားဖြင့်ကောက်ယူနှင့်နောက်ဆက်တွဲစာအုပ်ထဲတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်အမေရိကန်အတွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပထမဦးဆုံးပြည့်စုံလေ့လာမှုမှာ လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 1 နှစ်အောက်ယောက်ျားပဲ 30 ရာခိုင်နှုန်းကအဟောင်းအဟောင်း3နှင့် 30 နှစ်အကြားယောက်ျား၏ 45 ရာခိုင်နှုန်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးမကြာသေးမီကလေ့လာမှုမှာ, ငယ်ရွယ်စစ်တပ်စစ်သားသုံးပုံတစ်ပုံကျော် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အခြားအမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများက high-speed ကိုအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိသိသာသာတိုးဖေါ်ပြခြင်းနှုန်းထားများနှင့်တကွ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Non-စစ်ရေးလူငယ်များအကြားအလားတူတွေ့ရှိချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။  
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမည့်စာအုပ်အဘို့, လူသားကြားဖြတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူငယ်များစွာအားညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏စိုးရိမ်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းသောအလွဲသုံးစားမှုအတွက်လမ်းညွှန်မှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့တွင်အများအားဖြင့်စိတ်သဘောထားတစ်ခုမှာ -“ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းမှုကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်း၊ အဲဒီလိုသာဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုပြောပြဖို့ကျွန်တော်စိတ်မရှည်ဘူး။ ”
သူတို့ကအစကဲ့သို့သောသူတို့၏ဘဝကိုတခြားဒေသများထိခိုက်ကြသည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆို စုခြင်း သူတို့သည်မိမိတို့တစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုနှင့်အမြင်များကိုလည်းအတွက်အကြီးအကျယ်အပြုသဘောဆိုင်းသတိထားမိသောကြောင့်, porn အလွန်အကျွံပမာဏစောင့်ကြည့်အသုံးပြုပုံသုခချမ်းသာစိတ်ခံစားမှု ရပ် အဲဒါကို masturbating ။
ဤရွေ့ကားလုလင်တို့သည်မကြာခဏဘယ်လိုသူတို့ရဲ့နေရသည် လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် အကြီးအကျယ်တိုးတက် - တစ်ခုတိုးအပါအဝင် ယုံကြည်စိတ်ချမှုမိန်းမနှင့်အပြန်အလှန်, မျက်လုံးချင်းနှင့်နှစ်သိမ့်။ သူတို့ကအစအာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာ, သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကတဆင့်ရဖို့ပိုပြီးစွမ်းအင်သတင်းပို့, စိတ်ကျရောဂါ ပိုမိုအားကောင်းစိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ဆန္ဒအလျောက်ကို "အဘယ်သူမျှမ FAP" စိန်ခေါ်မှုမြားတှငျပါဝငျခွငျးပြီးနောက်များလျော့ကျခြင်း, ခံရခြင်း။
မည်သို့ပင်တဦးတည်း porn ရဲ့တန်ဖိုးကိုအကြောင်းကိုခံစားရလိမ့်မယ်မည်သို့ပိုမိုလေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူများကိုထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံရအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပိုပြီးသုတေသနပြုကောက်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအတောအတွင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ porn အချို့သောလူများအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်ငြင်းပယ်ဆက်လက်မယ်ဆိုရင်သို့သော်ကျနော်တို့ထိထိရောက်ရောက်, အသက်မပြည့်သေး, အကူအညီနှငျ့လမ်းညွှန်မှုသူတို့ထဲကအတော်များများဤလူငြင်းပယ်နေကြသည်။
ဒီ post ကို Nikita Coulombe နဲ့ပူးတွဲရေးသားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါ။ က Man ပြတ်တောက်ယင်းအပေါ်, ငါ့ကို TED ဟောပြောပွဲ "ယောက်ျားတွေ၏နိဂုံးကို။ "
ORIGINAL POST လင့်ထားသည်